न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग गर्दै भारतीय कृषकहरु आन्दोलनमा – NepaliEkta
22 September 2020 12 October 2020 Nepaliekta	0 Comments
भारतको केन्द्र सरकारले कृषिसुधार विधेयक भन्दै आएको तीन विधेयकमध्ये दुई आइतबार दुबै सदनमा ध्वनिमतले पारित भएको छ । अब सो विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएसँगै कानुन बन्ने छ । तर पन्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सो विधेयक विरुद्ध किसानद्वारा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
यो विधेयकले क्रमशः एपिएमसी (कृषिउपज बजार समिति) को साझा भाषा अर्थात् सामान्य भाषामा मन्डीहरू हटाउने र त्यसपछि निजी कम्पनीलाई महत्त्व दिने छ, त्यसले गर्दा किसानले आफ्नो बालीको उचित मूल्य नपाउने आन्दोलनकारी किसान बताउँछन् ।
यस विधेयकले परिस्थिति प्रणालीको व्यवस्था गर्ने बताइएता पनि किसान र व्यापारीलाई बजार बाहिर कृषि उत्पादन बेच्न स्वतन्त्रता मिल्ने बहानामा किसानको जमिन नै पुँजीपतिको हातमा पुग्ने भन्दै कृषकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको धारणा
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धेरै पटक भनेका छन्, न त सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्त्य गरिरहेको छ, न त यसले सरकारी खरिद बन्द गर्दै छ । प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विटमार्फत भनेका छन्– “मैले यो पहिलेदेखि भनेको छु र फेरि भन्छु, न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था जारी रहने छ । सरकारी खरिद जारी रहने छ । हामी यहाँ हाम्रा किसानको सेवा गर्न आएका छौँ । हामी अन्नदातालाई मद्दत गर्न र उनीहरूका भावी पुस्ताका लागि उत्तम जीवन सुनिश्चित गर्न हरप्रयास गर्ने छौँ ।”
यता, किसान सङ्गठनहरूले आरोप लगाए छन्, नयाँ कानुन लागु भएपछि कृषिक्षेत्र पनि पुँजीपति वा कर्पोरेट घरानाको हातमा पर्ने छ र किसानलाई नोक्सान पुग्ने छ ।
कृषिविज्ञ देवेन्द्र शर्माका अनुसार किसानको चिन्ता जायज छ । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, “यदि किसानले बजारमा राम्रो मूल्य पाइरहेका भए किन तिनीहरू बाहिर जान्छन् ?” उनी भन्छन्– उत्पादनमा किसानले सरकारबाट बजार व्यवस्थापन नभएकै कारण कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन विक्री गर्न बाध्य छन् । देवेन्द्रले भनेका छन्– “आउने दिनमा मण्डीहरू विस्तारै समाप्त हुन थाल्ने छन्, जसले गर्दा किसानलाई ठुलो क्षति पुग्ने छ ।”
पन्जाबमा गहुँ र चामलको सबभन्दा ठुलो हिस्सा या त एफसिआइद्वारा उत्पादन गरिएको छ, या एफसिआईले यसलाई खरिद गर्दछ । एफसिआई अब राज्यको उत्पादन किन्न सक्षम हुने छ, जसले एजेन्ट र आयुक्तलाई पुर्याउँछ । उही समयमा राज्यले यसको ५ प्रतिशत कमिसन पनि गुमाउने छ, जुन उसले एजेन्सीको खरिदमा राख्दै आएको छ । यस विषयमा भने आन्दोलनकारी डराइरहेका छन् ।
आन्दोलनकारीका अनुसार किसानलाई आफ्नो उत्पादन खुल्ला बजारमा बेच्नसक्ने अध्यादेशबाट २० करोड किसान, विशेष गरी जाटहरू स्तब्ध भएका छन् । त्यसका साथै मुख्यतः सहरी आयोगका एजेन्टका लागि ठुलो झट्का प्रमाणित हुने छ, जसको सङ्ख्या ३० हजार मानिएको छ । कैयौँ लाख मण्डी मजदुर र भूमिहीन खेत–मजदुर प्रभावित बन्ने छन् ।
आन्दोलनका एक अगुवाले भनेका छन्– “दुई राज्यबिचको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधानमा किसानका लागि विधेयक बजार होइन र साना किसान एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुग्दैनन्, अर्को राज्यमा जाने सवाल नै छैन । यो विधेयक बजारका लागि बनेको छ, किसानका लागि होइन ।”
यस विधेयकमा अन्न, दाल, खानेतेल, प्याज, आलुलाई आवश्यक वस्तुको सूचीबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्री बादलको राजीनामा
सो कृषि विधेयकका विरुद्ध हरसिमरत कौर बादलले मोदी क्याबिनेटबाट राजीनामा गरेर उनको पार्टी शिरोमणि अकाली दलको कडा विरोधको सङ्केत गरेकी छिन् । केन्द्रीय मन्त्रीपदबाट राजीनामा गरेपछि कौर बादलले ट्विट गरेर “किसान विरोधी अध्यादेश र विधेयकको विरुद्ध मैले केन्द्रीय मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेको छु । किसानको छोरी र बहिनीको रूपमा खडा भएकोमा गर्व गर्दछु” भनेकी छिन् ।
विपक्षी दलले तीन वटै विधेयकको विरोध गरिरहेको छ । काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले विधेयकलाई किसान विरोधी षड्यन्त्र बताएका छन् । गान्धीले ट्विटमा लेखेका छन्, “किसानका उत्पादन थोरै मात्रामा किनेर बेच्ने छन् । मोदी सरकारकाको कालो अध्यादेश किसान–कृषि मजदुरमाथि घातक हमला हो, ताकि उनीहरूलाई न कुनै अधिकार प्राप्त हुने छ, बरु किसान आफ्नो जग्गा पुँजीपतिलाई बेच्न बाध्य हुने छन् ।”
निजी कम्पनी कसरी आउँछन् ?
पहिलो विधेयक भनेको किसान उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (पदोन्नति र सरलीकरण) विधेयक–२०२० हो, जुन एउटा कानुन हुने छ, जसको तहत किसान र व्यापारी (कृषिउपज बजार समिति) मन्डीबाहिर फसल बेच्न स्वतन्त्र हुने छन् । यो स्मरण गर्नु आवश्यक छ, सरकारले (कृषिउपज बजार समिति) मन्डी बन्द नगरेको र किसानलाई यस्तो ब्यवस्था गरिरहेको, साथै उनीहरूले आफ्नो बाली राम्रो मूल्यमा निजी क्रेतालाई बेच्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
दोस्रो विधेयक किसानहरू (सशक्तीकरण र संरक्षण) मूल्य बिमा र कृषि सेवा बिल–२०२० हो । यो कानुन कृषि सम्झौताका लागि राष्ट्रिय फ्रेमवर्कका लागि बताइएको छ । यसले किसानलाई कृषि उत्पादन, कृषिसेवा, कृषिव्यापार फर्म, प्रोसेसर, थोकबिक्रेता, ठुला खुद्राविक्रेता र निर्यातकर्ताको बिक्रीमा संलग्न गर्नका लागि शक्तिप्रदान गर्ने सरकारको धारणा छ । सरल शब्दमा यसले किसानलाई अनुबन्ध (करास) खेती गर्न एकरूपरेखा प्रदान गर्दछ ।
अम्बालाका किसान हरकेश सिंह भन्छन्, सरकारले कानुनमा जे भन्यो, त्यो पहिले पनि भइसकेको छ । ठेक्काखेती गर्ने र उनीहरूको बाली बेच्नेजस्ता काम यसअघि पनि भइसकेका छन् र यो बिल “अम्बानी–अदानी” जस्ता व्यावसायिक घरानालाई लाभ दिनका लागि ल्याइएको छ । उनी भन्छन्, “यदि किसानले अहिले खेतीपाती गर्यो भने एसडिएममा जान्छन् । झगडा भएपछि मात्र अदालतमा जान्छन् । किन यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो ? यस्तो देखिन्छ, सरकारले किसानलाई बाँधेको छ र कर्पोरेट कम्पनीलाई खुला छोड्दै छ । उनीहरूलाई अब बाली किन्न लाइसेन्स आवश्यक पर्दैन ।”
त्यस्तै, किसान शक्ति सङ्घका अध्यक्ष र कृषि जानकार चौधरी पुष्पेन्द्रसिंह यो विधेयकबारे भन्छन्, यस कानुनपछि जोकोहीले आफ्नो बाली कसैलाई र जहाँसुकै पनि बेच्न सक्दछ, जुन राम्रो छ, तर यसमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रणाली कहाँ छ ? उनी भन्छन्, “यदि कुनै निजी प्लेयर छैन भने मण्डी बाहिर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो विवादास्पद बिन्दु हो । तीनै कानुनमा कुनै ठुलो समस्या छैन तर मन्डी बराबरको अर्को कुनै व्यवस्था छैन । यदि यो क्षेत्र तल झर्दै छ भने त्यहाँ एमएसपीको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।”
कृषि लागत र मूल्य आयोग
कृषि लागत र मूल्य आयोगले भारत सरकारको तर्फबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दछ । यो १ जनवरी १९६५ मा अस्तित्वमा आएको थियो । कृषि आयोगको सन्तुलित र एकीकृत मूल्य संरचना सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोगको गठन भएको थियो । कृषि लागत र मूल्य आयोगले कृषि उत्पादनहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यको बारेमा सल्लाह दिन्छ । कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य यस आयोगले जारी गर्दछ ।
यस बाहेक, उखुको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको सट्टा उचित र पारिश्रमिक मूल्य घोषणा गरिन्छ । गन्ना मूल्य निर्धारण आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणको उद्देश्यः
न्यूनतम समर्थन मूल्यको मुख्य उद्देश्य किसानहरुलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउनु र तिनीहरूको उत्पादनको लागि राम्रो मूल्य प्रदान गर्नु र सार्वजनिक वितरण प्रणालीको लागि खाद्यान्न खरीद गर्नु हो । बम्पर उत्पादन वा बजारमा यसको अधिकको कारण बालीको मूल्य घोषणा मूल्यबाट छोटो हुन्छ भने सरकारी एजेन्सीहरूले अधिकांश बालीहरू न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरीद गर्दछन् ।
सरकारले किसानहरूलाई उब्जनीको उचित मूल्य प्रदान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति एक मजबूत खरीद नीति र सम्बन्धित मर्मत सुविधा दिन असफल भएको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के हो ?
न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम मूल्य हो, जसमा सरकार किसानले बेचेको अनाजको सम्पूर्ण मात्रा खरीद गर्न तयार हुने गर्दछ ।
जब बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य घट्दै जान्छ, सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उत्पादन खरिद गरेर किसानको हितको रक्षा गर्दछ ।
सरकारले बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा गर्दछ ।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि र लागत आयोगको सिफारिशमा शीतकालीन र वर्षात मौसम गरि वर्षको दुई पटक घोषणा गर्दछ ।
कृषि लागत र मूल्य आयोगले भारत सरकारको तर्फबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दछ । यो १ जनवरी १९६५ मा अस्तित्वमा आएको थियो ।
कृषि आयोगको सन्तुलित र एकीकृत मूल्य संरचना सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोगको गठन भएको थियो । कृषिलागत र मूल्य आयोगले कृषि उत्पादनहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यको बारेमा सल्लाह दिन्छ ।
कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य यस आयोगले जारी गर्दछ ।
यसबाहेक, उखुको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको सट्टा उचित र पारिश्रमिक मूल्य घोषणा गरिन्छ । गन्ना मूल्य निर्धारण आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणको उद्देश्य
न्यूनतम समर्थन मूल्यको मुख्य उद्देश्य किसानलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउनु र तिनीहरूको उत्पादनको लागि राम्रो मूल्य प्रदान गर्नु र सार्वजनिक वितरण प्रणालीका लागि खाद्यान्न खरीद गर्नु हो ।
बम्पर उत्पादन वा बजारमा यसको अधिकका कारण बालीको मूल्य घोषणा मूल्यबाट छोटो हुन्छ भने सरकारी एजेन्सीले अधिकांश बाली न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्दछन् ।
सरकारले किसानलाई उब्जनीको उचित मूल्य प्रदान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति एक मजबुत खरिद नीति र सम्बन्धित मर्मत सुविधा दिन असफल भएको छ ।
← चिन्तन र समझदारी
मूल प्रवाहद्वारा संकलित राहत जैमिनीका पहिरो पीडितलाई हस्तान्तरण →